induction kudziisa kwekurapa uye mazino kunyorera kweanorapwa indasitiri
Induction kudziyisa kwekurapa uye kwemazino kunyorera-induction kupisa masisitimu ezvekurapa uye emazino indasitiri
Induction Kutya zvinowanzoshandiswa mukati mekurapa uye mazino maindasitiri. Vagadziri vezvigadzirwa zvekurapa vanobatsirwa neiyo induction yekudziya tekinoroji. Inopa yakachena, yakapfupika, inodzokororwa, uye yakachengeteka nharaunda nekuda kwekunge pasina murazvo wakashama kana mweya unouraya. Iyo inoshandiswa mumarabhoritari madiki pamwe nenzvimbo hombe dzekugadzira.
Mumakore achangopfuura mazhinji uye mazhinji ekurapa ekurapa masisitimu ari kushandisa induction kudziyisa kweanoparticle uye electromagnetic hyperthermia kurapwa kurapwa. HLQ DW-UHF induction kudziyisa michina yakagadzirirwa chaizvo neichi chishandiso mupfungwa. HLQ induction kudziyisa masisitimu anoshandiswa mumayunivhesiti mazhinji nenzvimbo dzekutsvagisa kutenderera pasirese.
Induction Heating inoshandiswa sei muMedical & Dental Maindasitiri?
Nanoparticle uye hyperthermia kurapwa kwekutsvaga uye kuyedza
Induction kuraswa kwemazino ekugezesa uye zvekurapa zvinodyarwa
Catheter inosungira kuti igadzire matipi eanorapa macatheters
Sterilizing yekubatana mune yemishonga kana biomedical kugadzira
Kuchenesa kurapwa kwema memory alloys ekushandisa ekurapa
Tsono uye zvekuvhiya zvirimo kupisa kurapa uye kupisa staking
Mishonga kana kupisa kweropa plasma kune IV zvishandiso
Induction Kuchenesa masisitimu anoshandiswa mune akawanda maitiro mukati meMedhi maindasitiri. Iyo mhando yeInduction kudziisa maficha iwe aunowana ndeye catheter tip inogadzira, mazino ekuboora zvishoma brazing, plastiki kune simbi yekubatanidza uye nezvimwe zvakawanda.
Kune akawanda mabhenefiti ekushandisa Induction Heating mukati meMushonga indasitiri. Iwo mabhenefiti iwo akachena kwazvo asiri ekutaurirana ekupisa maitiro ayo ane simba uye anonyanya kuzivikanwa kudziya maitiro. Induction kupisa inzira inokurumidza kwazvo yekudziya zvinhu zvako nenzira inonyaradza. Izvi zvichabatsira kunatsiridza yako yekugadzira kubudikidza uye kugadzirisa Hunhu.
Induction coil mhinduro ine makore mazhinji eruzivo mukati meMedhi indasitiri inotsigira vatengi nebasa nyowani rekuvandudza uye nekubatsira newowiri dhizaini zvigadzirwa zvezvinhu zvitsva. Induction coil Solutions yakabatsirawo makambani mazhinji ebhuruu-chip nekuchengeta iwo ekugadzira mitsara achimhanya pamwe newatsva Induction Heating makoiri, kana kugadziriswa Induction Heating Coils.
Kurapa uye Dhivha Chigadzirwa Kugadzira Mhinduro
Mune yanhasi iri kuwedzera kukwikwidzana hupfumi hwepasirese, makambani ekugadzira michina yezvokurapa ari kuramba achitsvaga nzira dzekudzikisa mitengo yekugadzira uye kukurumidza nguva-kumusika. Panguva imwecheteyo, kuvandudzwa kwehunhu hwechigadzirwa uye kugadzikana kwekugadzira kwakakosha kwazvo; panogona kunge pasina mapfupi kana hupenyu hwemurwere uye kugara zvakanaka kuri mungozi.
Vanogadzira michina yezvokurapa vanotendeukira kune epamberi induction yekupisa tekinoroji kuti vabatsire kusangana kwavo kugadzirwa, mutengo uye zvemhando zvinangwa. Induction kudziyisa inzira inokurumidza, yakachena, isiri-yekudyidzana yekukonzera kupisa kweakasiyana-siyana esimbi kujoina uye kupisa kurapa kunyorera. Kana ichienzaniswa ne convection, inopenya, yakavhurika murazvo kana dzimwe nzira dzekupisa, kupisa induction kunopa zvakanakira.
Yakawedzera kuenderana pamwe ne solid state tembiricha kudzora & yakavharwa loop yekutarisa masystem
Yakakwenenzverwa kugadzirwa ne - musero kushanda; hapana nguva yekuwachisa kana kureba kutonhorera pasi macircuit
Yakagadziridzwa mhando ine yakadzikiswa chigadzirwa warpage, kukanganisa uye kuramba mitengo
Yakawedzerwa hupenyu hwekugadzirisa pamwe nesaiti-yakatarisana kupisa pasina kupisa chero dzakatenderedza zvikamu
Zvakatipoteredza kurira pasina murazvo, utsi, kupisa kupisa, kusvibisa kusvibisa kana ruzha rukuru
Yakaderedzwa simba rekushandisa pamwe neanosvika makumi masere muzana emagetsi mashandiro
Pakati pezvakawanda zvekurapa zvekugadzira zvishandiso zvekudziisa induction:
Annealing Incoloy Tubing Mune Inodzivirira Mamiriro
Nesimba remagetsi 20kW, induction heat inogona kushandiswa kupisa simbi tubhu kusvika 2000 ° F yekuwedzera pachiyero che1.4 inches pasekondi.
Simbi yeBrazil Orthodontic Zvikamu
Zvekushandisa izvi isu takashandisa inert atmosphere kusimbisa mabatch ezve orthodontic zvikamu pa1300 ° F mukati me1 sekondi
Kuchenesa Kumisikidza Nitinol Kurapa Kunobatsira
Induction kudziyisa kwaishandiswa kupisa kupisa maseti ezvekurapa pane mandrel yekumisa saizi yakakodzera mumaminetsi maviri pa510 ° C.
Kuchemedza Matatu Akabatanidzwa Nzvimbo Pane YeMazino Prophy Jet
Nekodzero induction heat coil design, zvinokwanisika kusimbisa majoini matatu kamwechete. Mumasekondi gumi, majoini matatu pagungano rezvemazino prophy jet rakapiswa kusvika 1400 ° F yekushongedza ine yakagadziriswa goho kuenderana uye yakaderedzwa nguva yekutenderera.
Kupisa Kunodziya Yakasungirirwa Ndarira Yemagetsi Chibatanidzo MuPurasitiki Shell
Mhedzisiro, inodzokororwa mhedzisiro yakawanikwa pa500 ° F ne10 yechipiri kupisa kutenderera. Chinobatanidza magetsi chakabatanidzwa zvakasimba kune ganda repurasitiki pasina kupenya kana kupenya.
Categories Technologies Tags kupisa zvokurapa, HF kurapa kwekurapa, induction brazing yekurapa, induction kupisa kwemeno, induction kudziyisa mazino, induction kudziyisa zvekurapa, induction kudziya kwekurapa mazino, induction kupisa indasitiri yezvokurapa, induction kupisa muchina wekurapa, induction hita yekurapa, kurapwa induction hita Post navigation